Ny lalamby lalamby any Bursa dia tsy haingana loatra 'High Standard' - RayHaber
HomeTORKIAFaritra Marmara16 BursaNy lalamby lalamby any Bursa dia tsy haingana loatra 'fenitra avo'
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, Headline, Faritra Marmara, TORKIA 0
bursa lalamby lalandava dia tsy fenitra avo lenta
Night ken Raha nijery ny tranokalan'ny TCDD izahay dia nahita ny teninay amin'ny pejy 2019 Investment Program. Ankoatr'izay, gaga izahay nahita ny fampahalalana ao amin'ny pejy.
Ny hitantsika dia izao:
Tale Jeneralin'ny TCDD 1 Tamin'ny Aogositra 2019 dia nanao fanavaozana fahadimy tamin'ny programa fampiasam-bola.
Raha atao amin'ny teny hafa, ny anaran'ilay tetikasa Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, izay nampidirina tao anatin'ilay fandaharana ho fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony hatramin'ny volana Aogositra, novaina ho High Standard Railway miaraka amin'ny fanavaozana.
tcdd programa fampiasam-bola
Ao amin'ny lisitra ...
Ny zotra Ankara-Istanbul, izay mbola eo an-dalam-pamolavolana sy misy azy ireo, toy ny Kayaş-Ankara-Sincan, Sincan-Esenkent, Esenkent-Eskişehir, Eskişehir fiantsonana, Eskişehir-İnönü, İnönü-Vezirhan, Vezirhan-Köseköy, Köseköy eo ambony.
Ankara-Sivas, Ankara-Polatli-Afyon-Usak-Manisa-Izmir ary Yerkoy-Kayseri ireo dia voatanisa ao amin'ny sokajy High Speed ​​Train.
Na izany aza ...
Nanontanianay ireo izay mahalala ity raharaham-barotra ity hoe inona ny dikan'ny fanovana ny anaran'ilay andalana Osmaneli-Bursa ao amin'ny sokajy haingam-pandeha avo lenta ho ny Railway avo lenta amin'ny programa fampiasam-bola.
Indray, niseho ny fiakaran'ny vidin'ny haingam-pandeha ambony. Hoy izy ireo:
Yolcu Ny fiaran-dalamby sy ny fiaran-dalamby dia hiasa amin'ny tsipika Bursa. Noho izany, io toerana io dia lasa kilasy mahazatra mahazatra. "
Tiako ho lazaina ...
"Ity tsipika ity dia avy amin'ny sokajy fiaran-dalamby haingam-pandeha lafo ary tafiditra ao amin'ny sokajy faharoa, ny tsipika mahazatra izay misy ny lalamby fiantsonan'ny mpandeha ho an'ny mpandeha."
Amin'ity tranga ity ...
Ao amin'ny tetikasa High Standard Railway ao anatin'ny faritry ny tsipika mahazatra voatokana ho an'ny fitaterana entana antoandro sy alina, ny fiara fitaterana haingam-pandeha sy haingam-pandeha dia afaka miasa sy sarety mpandeha mahazatra.
Ny TCDD dia hanao ny safidy mifototra amin'ny toe-javatra misy ny andro sy ny anton'ireo ireo lamasinina haingam-pandeha avo lenta.
Misy fanantenana, mazava ho azy. Ny fanatanterahana an'izany fanantenana izany dia miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny politika.
Vola 3 miliara vola nolaniana tamin'ny 2.1 miliara
1 ny Tale foibe TCDD Araka ny fandaharam-pandraharahana 2019 nohavaozina tamin'ny volana Aogositra, ny Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli High Standard Railway Project dia misy zoro kilometatra 180 kilometatra.
Ny fandaharam-potoana ...
Ny 3, izay ekipa rehetra dia tombanana TL tapitrisa. Ny 1 miliara 940 tapitrisa 508 arivo kilao ao amin'ny 2018, 252 tapitrisa 010 arivo kilao no lany tamin'ny 2019, ary ny fandaniana dia nahatratra 2 miliara 192 tapitrisa 518 arivo kilao.
Ny tsipika Yenişehir-Osmaneli haorina indray ary ny tsipika Bursa-Yenişehir dia hampahafantarin'ny felam-pikorontanana-electromekanika.
Valiny maika indrindra: Voaroaka indray ny tara-lamasinina amin'ny volana manaraka
Amin'ireo andalana ireo,… Nambaranay tamin'ny Alatsinainy ary omaly fa nofoanana ny volabe 3 miliara 2018 tapitrisa tapitrisa ao amin'ny 2 april 520 ho an'ny besinimaro Bursa-Yenişehir superstructure sy ny electromechanical ary ny tsipika Yenişehir-Osmaneli dia nofoanana.
Raha ny marina ...
Tamin'ny Jona 2018, nambara ilay malemy, noho ny fahasahiranana ara-toekarena manerantany, efa nihoatra ny 4 miliara kilao ny vidiny talohan'ny nanombohany.
Tsy mora ny mitondra fitombo toy izany. Noho izany, ny mpanatontosa dia tsy afaka nanolotra ilay toerana, ny dingana nanafoanana ny tenda.
Avy any Serbia ny vaovao momba ny famaliana vonjy maika.
Ny solombavambahoaka AK an'ny Bursa Dr. Recep Tayyip Erdogan tany Belgrade niaraka tamin'ny antoko AK. Mustafa Esgin fanorenana ny Torkia ny mihevitra fa Belgrade-Sarajevo Highway Minisitry ny Fitaterana Cahit Turhan nanokatra ny lanonana fangadiana malefaka fanafoanana.
Taorian'ny fidiran'ny Minisitra dia nitatitra ny fivoarany izy:
"Tsy hisy fanemorana be dia be, ary ny lavanty efa nofoanana dia hatao amin'ny volana manaraka."
2 ho an'ny fiaran-dalamben'i Bursa dia miasa ny toerana
Raha ny marina dia ny Bursa Expenditures ho an'ny fiarandalamby Bursa, izay nohavaozina ho High Standard Railway amin'ny programa fampiasam-bola dia manambara ny toe-draharaha amin'ny orinasa ihany koa.
Eny tokoa ...
Ny programa, 2019 afa-tsy 252 miliara 10 tapitrisa dolara no lany, ary hita taratra ao amin'ity toeram-panorenana ity.
Nandritra ny fotoana ela dia misy fantsom-bolo mivaingana tsy misy afa-tsy ao amin'ny Demirtaş Viaduct sy ao amin'ny faritry ny Ring Ring Kazıklı. Miara-mandeha amin'ny mpiasa 4 izay miasa koa izy. (hetsika - Ahmet Emin Yılmaz)
Fanamarihana momba ny fifandraisana serivisy ho an'ny seranana amin'ny Eoropa 11 / 06 / 2019 Fanamarihana momba ny fifandraisana an-dalamby avo lenta amin'i Eoropa: M. Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fampiroboroboana, Halkalı- Ny entana mitondra ny kapila manokan'i Kapıkule, Çerkezköy-Kapıkule dia hampitombo ny fananganana ny sehatra, ny Union Union (EU) ho fananganana ny tetikasa dia hampiasaina amin'ny 275 tapitrisa euro dia ho vita amin'ny famitana ny tetikasa fa ny tetezamita ho an'ny seranan-tsambo ho an'ny firenena eoropeana dia ho tratra. Minisitra Turhan, Halkalı-Kapıkule Railway Line Project ÇerkezköyAo amin'ny lahateniny amin'ny fandefasana sonia ny fifanarahana fanorenana ny fizarana Kapıkule, dia nilaza izy fa ny fahasambarana dia manampy iray hafa amin'ny tetikasa goavana toy ny seranam-piaramanidin'i Istanbul, Marmaray Tube Crossing, ny Yavuz Sultan Selim Bridge, ny seranan'i Avaratr'i Marmara sy ny Eurasia Tunnel.
Ny Ben'ny tanàna Altepe dia manangana seranana faran'izay haingana 12 / 03 / 2013 Ny biraon'ny Ben'ny tanàna Altepe dia tsy milanja fiarandalamby intsony, mamokatra fiaran-dàlamby haingana izahay Bursa Metropolitan Mayor Recep ALTEPE, tonga any Konya dia afaka milaza aminareo ao amin'ny fandaharanao ... Ankehitriny, tram, ny metro dia tsy mamoaka fiaran-dalamby haingana, hoy izy. Samy afaka mamokatra ny zava-drehetra any amin'ny tanàna indostrialy izao i Bursa sy ny firenentsika. Manana tanjona ny firenentsika, noho izany dia mila manao fandrosoana isika, tanàna, governemanta ao an-toerana. Nambaranay nandritra ny fifidianana izany ary nahomby izahay. Nitsidika ny orinasanay tao Konya ihany koa ireo ben'ny tanànanay. Ny fitaovana an-trano voalohany, anisan'izany ny rindrambaiko, dia vita. Nahazo ny taratasy fanamarinana azy izy tamin'ny volana lasa ary afaka mandray anjara amin'ny tolotra izy izao. Ny fikambanantsika indostrialy dia manana fikambanana R & D. Famokarana milina ...
Mihabetsaka ny fiaran-dalambin'i Shina sy ny tetezan'ny làlam-be 07 / 11 / 2017 Na dia eo amina dingana famolavolana drafi-pandaminana mifandraika amin'ny fitomboana ara-kalitao aza i Shina dia manavao haingana ny foto-drafitry ny fitateram-bahoaka. Ny dian-tongotr'ity dingana maoderina ity dia ny lalam-barotra vaovao sy ny haingam-pandeha haingam-pandeha. Nanangana tetezamita miisa maherin'ny arivo i 800 i Shina ary maherin'ny iray arivo kilaometatra amin'ny tetezan'ny làlam-by haingam-pandeha, hoy ny 10, araka ny filazan'ny tompon'andraikitry ny fitateram-bahoaka amin'ny alahady. Niresaka tamin'ny tetezamita iraisam-pirenena nokarakaraina tao Wuhan, renivohitry ny faritanin'i Hubei ao Shina i Zhou Wei, injenieran'ny minisitry ny fitaterana, fa any amin'ny faran'ny 2016 dia misy tetezana 805 arivo 300 manerana an'i Shina. Araka ny voalazan'i Zhou, ny tontolon'ny tady 10 manerantany indrindra ılı
Fiaran-dalamby haingana mankany Trabzon tsy misy fiaran-dalamby haingam-pandeha 26 / 03 / 2016 Trabzon: Nihaona tamin'i Binali Yildirim ny filohan'ny Provinsy Trabzon Party Heydar Revi, ny fitaterana, ny raharaham-bahiny ary ny fifandraisana. Revi, Trabzon, ireo tetikasa rehetra mifandraika amin'ny làlambe, dia nanao fangatahana ny Minisitra ary nilaza izany. Ny Prezidansa ao amin'ny Provinsa Party Haydar Revi, Ankara, dia manao fitsidihana maromaro amin'ireo manampahefana voakasika amin'ny tetikasa izay manan-danja ho an'i Trabzon. Ny iray tamin'ireo fivoriana ireo dia natao tamin'ny Minisitry ny Fitaterana, ny Maritime Affaires sy ny Fifandraisana Binali Yildirim. Niteny i Revi hoe, Nihaona tamin'ny Minisitra Binali Yıldırım izahay. Ity fivoriana ity dia niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka, Metropolitan Mayor ary governora imiz
Fanamarihana momba ny fifandraisana serivisy ho an'ny seranana amin'ny Eoropa
Ny Ben'ny tanàna Altepe dia manangana seranana faran'izay haingana
Mihabetsaka ny fiaran-dalambin'i Shina sy ny tetezan'ny làlam-be
Fiaran-dalamby haingana mankany Trabzon tsy misy fiaran-dalamby haingam-pandeha
Bursa avo dia avo malemy
Ny fanirian'i Bursa ho an'ny antsasaky ny taonjato faha 200 dia miafara amin'ny fiarandalamby haingana
Tsy zoma intsony ny Menderes
Istanbul Metro dia tsy afaka miresaka amin'ny finday intsony
Ny famenoana ireo karatra ireo dia tsy 3 lira intsony